Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Avrily, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Avrily, 2010
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Avrily, 2010
Amerika Avaratra 30 Avrily 2010
Loka Best of Blog 2010 : Ireto avy ireo nahazo…
Eoropa Andrefana 17 Avrily 2010
The BOBs have been decided! Tonga eo amin'ny famaranana ny andiany fahaenina amin'ny fifaninanana Best of Blogs (BOBs) karakarain'ny Deutsche Welle ka midera ny mpandresy tamin'izany ny fiaraha-monin'ny Global Voices. Tamin'ity taona ity, maro tamin'ny mpandray anjara ato amin'ny Global Voices no voafantina (araka ny nasongadin'i Diego Casaes), ary misy koa ny...
Amerika Avaratra 17 Avrily 2010
Tao amin'ny blaogin'i Jillian C. York no nipoiran'ity lahatsoratra ity voalohany. Nandritra iny herinandro lasa iny, nahazo tatitra avy amina olona maromaro aho fa nakatona na nofafana tao amin'ny Facebook ny pejy manokan'izy ireo tao amin'nyFacebook- . Tamin'ny voalohany dia namana lehilahy any Maraoka no tratra. Avy eo vehivavy, namana...
Maraoka: Tandindonin-doza ve ny Kristiana?
Maraoka 08 Avrily 2010
Tany amin'ny fiandohan'ny Martsa, nahita ireo mpanara-baovao fa manodidina ny 20 eo ireo mpiasa tranainy tao amina fitaizana zaza kamboty iray no noroahana handao ny firenena izay noraisin'izy ireo ho tanindrazany. Ilay tranga, ary maro hafa no nanaraka azy ity, dia nametraka ho eny aloha indray ny adihevitra momba ny toeran'ny finoana Kristiana ao anatin'ny Fanjakana.
Tontolo Arabo: Tratry ny gripan'ny iPad ny Arabo
Arabia Saodita 07 Avrily 2010
Mailaka nividy ny farany indrindra amin'ireo kilalao sy mampidera izany, mpitoraka blaogy sy mpampiasa Twitter maromaro avy amin'ny tontolo Arabo no mankalaza ny iPad. Ity no azon'ny mpianatra Saodiana iray sy mponina iray any Koety hambara momba ilay kilalao vaovao an'i Apple.
Libanona: Fielezam-baovao any amin'ny tontolo arabo
Iràka 06 Avrily 2010
“Nihorohoro tamin'ny fanjakazakana tokan'ny teknolojia tandrefana ny Arabo tamin'ny 1991 (tifitra tsara kendry nasehon'ny CNN ohatra nefa tsy nampiseho ny fahavoazana mihatra amin'ny sivily tratran'izany)… Tamin'ny 2003 kosa dia nahazo ny fantsom-baovao iray amin'ny 32 hafa azo amin'ny zana-bolana Al Jazeera ny tontolo Arabo/Silamo hitatitra momba ny ady…Nampatahotra ny sivilizasiona...